Engaland ma ka badbaadi kartaa wadadii Spain?
HomeWararka MaantaEngaland ma ka badbaadi kartaa wadadii Spain?
19/06/2014 Abdiwahab Ahmed
Habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa cawda loo jaray oo ka hadhay koobkii aduunka xulka Spain oo haystay Koobkkii aduunka ee ugu danbeeyey kana mid ahayd kooxihii ugu waaweynaa ee loo sadaalinaayey in ay Qaadi doonaan koobka aduunka ee ka socdas Brasil.
Xulka Chile waxaa uu si dhibyar uga gudbay xulka Spain taas waxa sadaal looga qaadan karaa ciyaarta Caawa dhex maraysaa labada xul ee England iyo Uruguay, labadan xul waxay wataan 0 dhibic xulkastana Waa laga soo badiyey ciyaartiisii hore kooxdii dhulka la dhigaana waxay seegi doontaa koobka aduunka Waxay ku noqon doontaa dalkeedii hooyo.
Hadaba xulka England oo ciyaartii hore Talyaanigu kaga badiyey 2 iyo 1 ayaa waxaa la eegayaa awooda Aya caawa la yimaadaan in ay noqdaan qaar ku sii dagaalamaya kaalintooda koobka aduunka iyo inay firaaqeeyaan ciyaaraha ka socda Brasil.